မှာက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရယူသုံးခြင်းအားဖြင့် https://pdf.to , သင်တို့ရှိသမျှသည်တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ, ဝန်ဆောင်မှုဤဝေါဟာရများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူ, သင်မဆိုသက်ဆိုင်ဒေသခံဥပဒေများနှင့်အတူလိုက်နာမှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းသဘောတူကြသည်။ သင်တို့သည်ဤဝေါဟာရများကိုမဆိုသဘောတူမထားဘူးဆိုရင်, သင်သည်ဤ site ကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုခြင်းမှပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ ဤဆိုဒ်တွင်ပါရှိသောအဆိုပါပစ္စည်းများသက်ဆိုင်သောမူပိုင်ခွင့်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်ထားပါသည်။
ခွင့်ပြုချက်ယာယီသာကြည့်ရှုပုဂ္ဂိုလ်ရေး non-စီးပွားဖြစ်ကူးပြောင်းရေးကာလအဘို့ Pdf.to ရဲ့ website မှာပေါ်ပစ္စည်းများ (သတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကို) ၏တဦးတည်းမိတ္တူကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ဒါကလိုင်စင်များ၏ထောက်ပံ့ကြေးမဟုတ်ဘဲခေါင်းစဉ်တစ်ခုလွှဲပြောင်းဖြစ်ပါသည်, ဤလိုင်စင်အောက်တွင်သင်သည်မပြုစေခြင်းငှါ:
decompile သို့မဟုတ် Pdf.to ရဲ့ website တွင်ပါရှိသောမည်သည့် software ကို engineer reverse ကြိုးစား;
အခြားသူတစ်ဦးသို့မဟုတ် 'မှန်' 'ဆိုအခြားဆာဗာကိုပေါ်ပစ္စည်းများဖို့ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်း။
သင်တို့သည်ဤကန့်သတ်မဆိုချိုးဖောက်နှင့်မည်သည့်အချိန်က Pdf.to အားဖြင့်ရပ်စဲစေခြင်းငှါလျှင်ဒီလိုင်စင်ကိုအလိုအလျှောက်ရပ်ဆိုင်းရလိမ့်မည်။ ဤအပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဤလိုင်စင်များ၏ရပ်စဲအပေါ်သို့သင့်ကြည့်ရှုရပ်စဲအပေါ်သို့, သင်သည်သင်၏အပိုင်ထဲမှာရှိမရှိအီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်ပုံနှိပ် format နဲ့မဆိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပစ္စည်းများဖျက်ဆီးရမည်။
Pdf.to ရဲ့ website တွင်အဆိုပါပစ္စည်းများအဖြစ်အခြေခံ '' ဖြစ်သကဲ့သို့ '' အပေါ်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ Pdf.to မျှအာမခံစေသည်, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသို့မဟုတ်ဆိုလိုနှင့်ဤဥပဒေကုန်သည်တို့သည်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ကြံ့ခိုင်ရေး, ဒါမှမဟုတ်အသိဥာဏ်ပညာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အခွင့်အရေးများနဲ့အခြားချိုးဖောက်မှု Non-ချိုးဖောက်မှု၏, န့်အသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အဓိပ်ပာအာမခံသို့မဟုတ်အခြေအနေများအပါအဝင်အခြားအာမခံ disclaims နှင့် negates ။
ထို့ပြင် Pdf.to ကိုမဆိုကိုယ်စားပြုတိကျမှန်ကန်မှု, ဖွယ်ရှိရလဒ်များကို, သို့မဟုတ်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပေါ်မှပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရကိုရည်မှတ်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများမှသို့မဟုတ်ဤ site ကိုချိတ်ဆက်မဆိုက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သက်ဆိုင်သောခိုင်လုံသို့မဟုတ်လုပ်မထားဘူး။
အဘယ်သူမျှမဖြစ်ရပ်အတွက် Pdf.to သို့မဟုတ်ယင်း၏ပေးသွင်း Pdf.to ရဲ့အပေါ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲဖို့အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းထဲကပေါ်ထွက်လာသောဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက် (ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အပါအဝင်, ဒေတာသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းများဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်) ဖြစ်ရလိမ့်မည် Pdf.to တစ်ခုသို့မဟုတ် Pdf.to ကိုယ်စားလှယ်အခွင့်အာဏာလျှင်ပင်က်ဘ်ဆိုက်, နှုတ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေ၏အရေးအသားအတွက်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အချို့သောတရားစီရင်မှုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအာမခံ, ဒါမှမဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ဖွစျပှားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှု၏ကန့်သတ်မှုအပေါ်ကန့်သတ်ခွင့်ပြုမပေးတဲ့အတွက်အဲဒီကန့်သတ်သည်သင်လျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ပစ္စည်းများ 5. တိကျပြတ်သားမှု
Pdf.to ရဲ့ website တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသောအဆိုပါပစ္စည်းများ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်ပုံ, ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံပြပွဲအမှားအယွင်းများပါဝင်သည်နိုင်ဘူး။ Pdf.to က၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပေါ်မှပစ္စည်းများကိုမဆို, တိကျမှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံသောသို့မဟုတ်လက်ရှိဖြစ်ကြောင်းခိုင်လုံပါဘူး။ Pdf.to အသိပေးစာမပါဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်ယင်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါရှိသောပစ္စည်းများမှစသောအပြောင်းအလဲလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော် Pdf.to အဆိုပါပစ္စည်းများ update လုပ်ဖို့ဆိုကတိကဝတ်လုပ်မထားဘူး။
Pdf.to ယင်း၏က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဆိုဒ်များအားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်မဟုတ်နှင့်မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောနှင့်ဆက်စပ် site ကိုရဲ့ contents များအတွက်တာဝန်မယူခဲ့ပါသည်။ မည်သည့်လင့်ခ်၏ပါဝင်မှုဆိုက်၏ Pdf.to နေဖြင့်ထောက်ခံချက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ မဆိုဤကဲ့သို့သောနှင့်ဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Pdf.to အသိပေးစာမပါဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်ယင်း၏က်ဘ်ဆိုက်အဘို့ဝန်ဆောင်မှုဤဝေါဟာရများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်စေနိုင်သည်။ ဒီ website ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုဝန်ဆောင်မှု၏ဤဝေါဟာရများ၏ထို့နောက်လက်ရှိဗားရှင်းအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူကြပါတယ်။
ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် Connecticut ၏ဥပဒေများနှင့်အညီလုပ်ကိုင်နှငျ့သငျဘယ်သို့ကြောင်းပြည်နယ်သို့မဟုတ်တည်နေရာအတွက်တရားရုံးများ၏သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှတင်သွင်းနေကြသည်။
PDF.to ၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို upload၊ PDF.to သည်ဖောက်သည်များ၏ပါဝင်မှုကိုမစစ်ဆေးပါ PDF.to ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ သတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် PDF.to သည်တာဝန်မရှိပါ။ ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး စီသည် PDF.to နှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းများအားလုံးအတွက်၊ အာမခံချက်များအပါအ ၀ င်ပစ္စည်းများတိကျမှန်ကန်မှုနှင့် hyperlink များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများအတွက်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်များအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ PDF.to သည် PDF.to ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အင်တာနက်မှအသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်အင်တာနက်မှပါ ၀ င်သူများရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ၏တိကျမှု၊ အရည်အသွေးနှင့်သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအာမခံချက်မရှိပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးသတိပြုရန်မှာအသုံးပြုသူတင်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာများသည်တင်ထားသောနာရီအတွင်းဖျက်သိမ်းခြင်းခံရပြီး၎င်းတို့ကိုပြောင်းလဲထားသောအချက်အလက်များကို ၂၄ နာရီအတွင်းလည်းဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ သဘောအရယာယီသိုလှောင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
သင် PDF.to မှမည်သည့်အကြောင်းအရာသည်သင်ပိုင်ဆိုင်သည်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ထားသည့်မည်သည့်မူပိုင်ကိုမဆိုချိုးဖောက်သည်ဟုယုံကြည်လျှင်အောက်ဖော်ပြပါသတ်မှတ်ထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ ("DMCA") အေးဂျင့်သို့စာဖြင့်ရေးသားထားသောမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာအသိပေးစာ (“ သတိပေးချက်”) ကိုစာဖြင့်ပို့နိုင်သည်။ ။ အသိပေးချက်တွင်၊
(ခ) သင်၏မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်သည်ဟုသင်တောင်းဆိုသောအကြောင်းအရာများပါသော URL. သို့မဟုတ် PDF.to ရှိအခြားတိကျသောတည်နေရာကိုဖော်ထုတ်ပါ။
(ဂ) မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင် (သို့) ပိုင်ရှင်ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုထားသောပုဂ္ဂိုလ်၏အီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်မှတ်ကိုပေးရမည်။
()) အငြင်းပွားဖွယ်အသုံးပြုမှုကိုမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ဥပဒေကခွင့်မပြုဘူးဟုသင်ကယုံကြည်စိတ်ချကြောင်းကြေငြာပါ။
(င) သင်၏အကြောင်းကြားစာတွင်ပါ ၀ င်သည့်အချက်အလက်များသည်တိကျမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြချက်တစ်ခုပါ ၀ င်ပြီး၊ သင်သည်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ နှင့်,
(စ) သင်၏အမည်၊ စာတိုက်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာထည့်ပါ။
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းသင်၏အသိပေးချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ထားသော DMCA ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့အီးမေးလ်၊ ဖက်စ်သို့မဟုတ်မေးလ်ဖြင့်ပေးပို့နိုင်သည်။
Charles Lee Mudd ဂျူနီယာ
411 အက်စ် Sangamon လမ်း
PDF.to မှသင့်လျော်သောအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိပါက၎င်းသည်ချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသောအကြောင်းအရာများအား ၀ င်ရောက်မှုကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်ပြီး DMCA နှင့်အညီဆက်စပ်သည့်အကောင့်များ (ရှိခဲ့လျှင်) ကိုအဆုံးသတ်သည်။
PDF.to သည်ထပ်လောင်းချိုးဖောက်သူဟုယူဆရသောအသင်း ၀ င်များကိုသင့်လျော်သောအခြေအနေများနှင့်တစ်ခုတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အဆုံးသတ်ခြင်းမူဝါဒကိုချမှတ်ခဲ့သည်။ PDF.to သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် PDF.to ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ ထပ်မံကျူးလွန်သောချိုးဖောက်မှုဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေအခြားသူများ၏မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်သူမည်သူမဆိုအသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
PDF ကို ICO သို့
BMP မှ PDF
PDF မှ SVG သို့
PDF ကို WebP သို့
PDF ကို GIF သို့ပို့သည်
PSD မှ PDF
PDF မှ ICO
PDF မှ BMP
PDF မှ SVG
PDF မှ WebP
PDF သို့ GIF ဖိုင်
PDF မှ PSD
253,649 2019 ခုနှစ်ကတည်းကစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများ!
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ - ကိုယ်တို့အကြောင်း - API - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - Service ၏စည်းမျဉ်းများ - Twitter
ဖွငျ့ nadermx - © 2021 PDF.to
သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည်တစ်နာရီလျှင်သုံးနာရီကျော်လွန်ပြီးသင်၏ဖိုင်များကိုပြောင်းနိုင်သည် 59:00 သို့မဟုတ်ယခု sign up လုပ်ပြီးပြောင်းပါ
Batch processing သည် Pro အသုံးပြုသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ ဖိုင်များစွာကိုတပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်ရန်ယခုအဆင့်မြှင့်ပါ။